Ungagcwalisa njani umthengisi we-Amazon phakathi kunye namagama angundoqo ngendlela efanelekileyo?
Ngaphambi kokuba nantoni na enye, masijongane nayo - igama elingundoqo kunye nokucwangciswa kwexesha elide kwi-Amazon lihluke kakhulu xa kuthelekiswa naliphi na iinjongo eziphambili ezifana ne-Google ngokwayo. Ndiyathetha, umzekelo, imeko xa ufuna ukubandakanya amanqaku amanqaku afanelekileyo kunye nemigqaliselo yosesho elide - ngokuthe ngqo kumacandelo akhethekileyo ephepha lakho lomkhiqizo obizwa ngokuba yi-Amazon umthengisi ophakathi kwamagama angundoqo amagama. Yindawo elungileyo yokubeka onke amagama angundoqo afanelekileyo kwinqaku lezinto / umkhiqizo wakho, kodwa usenakukwazi ukufumana indawo yawo kwisihloko somkhiqizo wakho, okanye umzekelo uluhlu lweebhola - lebanon information technology companies.
I-Amazon yakho yomthengisi wecandelo eliphambili legama lendawo efanelekileyo yokusebenzisa ukuhlukahluka kwegama elingundoqo elingenakuze lenze nawuphi na ukuhlanganiswa okubonakalayo (umzekelo, ukuchithwa okuqhelekileyo okuye kwaba ngamagama aphambili ngendlela yabo, iindibano zokudibanisa, ukuhlanganiswa kwe-LSI, njll. ) U.
I-Amazon Seller Central Backend Amagama angundoqo
Qaphela, ukuba ukususela ekuqaleni kuka-2017 iindawo eziphambili ze-Amazon kumthengisi wamagama akwii-key key zikholiswe ngamagama angama-250 kuphela. Kuthetha ukuba wonke umthengisi wexesha elikhulu kwi-Amazon kufuneka asebenze ngokubakho konke okukhoyo kunye nazo zonke izilungiso ezifunekayo ezithathwe ngexesha elifanelekileyo. Kungenxa yoko ngezantsi ndiya kukubonisa isethi esifutshane seengcebiso kunye neengcebiso kumsebenzi wakho kumthengisi wakho we-Amazon eyintloko ye-backend keyword. Cinga ngeengcamango ezilandelayo kunye neengxelo xa ulungisa:
Thatha uluhlu oluphambili lwegama lakho elijoliswe kuyo kunye nokubeka phambili zonke idibaniso ngokubaluleka kwazo. Ngaloo ndlela, phawula ukuba akukho mfuneko yokuphinda naluphi na amagama angundoqo - nje ngokuba i-Amazon iya kuhlanganisa iintlobo ezahlukeneyo zokukhangela iimpawu zentshukumo emininzi kwimigangatho emihlanu ye-backend by default.
Zama ukungena ngeendlela ezininzi ezikhethiweyo kwiindawo ezihlanu kwizinto ezinokuba. Kwakhona-akuyimfuneko ukuba nonke ukusebenzisa igama elilodwa elingundoqo. Kungcono usebenzise indawo enokulinganiselwa ngokuhlakanipha.
Gxininisa ekulondolozeni abalinganiswa kuwe kumthengisi wakwa-Amazon umgca wecandelo elingundoqo lamagama angundoqo. Khumbula, kunye nabalinganiswa abambalwa banqanyulwa, ngamanye amaxesha ungeze ngegama elitsha lokukhangela.
Naluphina uphinda ngokuphindaphindiweyo ngendlela yokusebenzisa amagama angundoqo amagama kufuneka agwenywe. Gcina ukhumbule ukuba ukusuka kwimbono ukuba i-A9 ye-A9 ye-algorithm isekelwe, amagama amabini anxulumene ne-short hyphen sele sele ehlanganisa onke amagama kunye negama elidibeneyo. Umgaqo ofanayo ngowama-aphezulu angaphantsi nawasezantsi, amagama e-filler / stop, amaphulo okuvakalisa (qiniseka ukuba agwenywe ngazo zonke iindleko!).
Igama ngalinye eliphambili okanye ibinzana elide kufuneka lihlukaniswe kunye neendawo ezilodwa. Ndiyathetha ukuba ii-commas azikho mfuneko kuzo zonke, ungcono ukuba ungazivumeli ukuba zithathe loo ndawo yempawu ebalulekileyo.
Emva kwakho konke, qinisekisa ukuba usebenzisa lonke indawo kwi-Amazon yakho yomthengisi wecandelo eliphambili le-keyword. Ngaloo ndlela, ungakulibali ukuba unokukhangela ngokuphindwe kabini ukuba zonke izinto zikhona ngaphandle kokubandakanya nayiphi na amagama akwi-key of a little relevance.